Archive du 20170807
Famonoana an’i Tsiandopy Jacky Nosamborina ny zanak’anabaviny
Voasambotra tany Nosy be Hell Ville ny sabotsy vao mangiran-dratsy tokony ho tamin’ny 2 ora maraina ny lehilahy iray antsoina hoe Solomanjary Francesco.
Kandidà amin’ny 2018 Maro no tsy ho ampoizina
Nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny filatsahan-kofidiany ho filoham-pirenena amin’ny taona 2018 tetsy
Hery Rajaonarimampianina “Miala izay tsy mahazaka ny andraikiny”
Tokony hametra-pialana ireo olona tsy mahazaka ny andraikiny, hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tao anatin’ny fandaharana fotoam-bita nivoaka ny faran’ny herinandro teo.
Pastera Mailhol “Hanafoana ny kolikoly aho”
Kandida hofidiana ho filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ho avy io Atoa Christian André de Donné fantatry ny maro amin’ny anarana hoe : Pastera Mailhol filoha mpanorina ny fikambanana Apokalipsy maneran-tany.
Marc Ravalomanana Niantso firaisankina sy fiaraha-miasa
Feno dia feno ny fandaharam-potoan’i Marc Ravalomanana ny herinandro lasa teo iny ; 5 andro izy no nitsidika ny faritra atsimo atsinana sy atsimon’ny nosy iny.Nisy aloha ny kongresim-paritry ny Tiako i Madagasikara notanterahana tany Manakara ny alakamisy 3 aogositra narahana fanofanana ireo mpikambana TIM.
Filohan’ny FIZAFATO Norombahan’ Bevata ny fandresena
Tontosa omaly alahady 6 aogositra tetsy amin’ny ENS Ampefiloha ihany ilay fifidianana ho filohan’ny fikambanana zanaka am-pielezan’i Faritanin’i Toliara na ny Fizafato rehefa nitoerana disadisa talohan’ny fanatanterahana azy.
Mpivarotra ao Andohan’Ilakaka Tofoky ny didy jadon’ny Ben’ny Tanàna
Velon-taraina amin’ny afitsoky ny Ben’ny tanàna any Andohan’Ilakaka ny mponina, indrindra fa ny mpivarotra amin’izao fotoana izao.
Fitrandrahana “Graphite” ao Ambatolampy Loza ho an’ireo mpianatra madinika
Fahasimban’ireo voly sy ny fiainan’ireo mponina ao an-toerana, raha ny fitarainan’ireo fokonolona manamorona toeram-pitrandrahan’ny orinasa kanadianina 1 ao Ambatolampy, distrikan’i Brickaville,
Be tsy handraofana
Isan’ny nanaitra ny maro ny fahenoana ny isan’ireo olona nandrotsaka ny antontan-taratasiny mba hofantenana ho ao anatin’ilay rafitra hitondra sy handrindra ny fampihavanam-pirenena na ilay antsoina hoe Filan-kevitry ny fampihavanana Malagasy (CFM).
HJRA Ampefiloha Ampy tsara ny tahirin-drà
Na dia mahatratra 100 paosy isan’andro aza ny filàn-drà eto an-drenivohitra amin’ny ankapobeny, dia tsy manana olana amin’izany ny toby fitehirizan-drà etsy amin’ny hôpitaly HJRA Ampefiloha.
Asa tanana vita amin’ny landy Manomboka manahirana ny akora fototra
Asa iray anisan’ny mamelona fianakaviana an-jatony ny fanaovana asa tanana vita amin’ny landy eto amintsika.
Hatao any Antsohihy ny 24 ka hatramin’ny faha 27 aogositra izao ny Festival Lampogno.